ब्वाइफ्रेन्डले मोटी भनेर छोडेपछि ‘सुजनाले घरमै घटाइन् ६ महिनामा ३६ केजी’ ! कसरी भयो सम्भव ? हेर्नुहोस - Ramechhap Online
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/ब्वाइफ्रेन्डले मोटी भनेर छोडेपछि ‘सुजनाले घरमै घटाइन् ६ महिनामा ३६ केजी’ ! कसरी भयो सम्भव ? हेर्नुहोस
ब्वाइफ्रेन्डले मोटी भनेर छोडेपछि ‘सुजनाले घरमै घटाइन् ६ महिनामा ३६ केजी’ ! कसरी भयो सम्भव ? हेर्नुहोस
सानोमा म एकदमै दुब्लो थिएँ। कक्षा ११ मा हुँदा सवारी दुर्घटनामा परेँ। बेड रेस्ट गर्नुप¥यो। खानपानमा कन्ट्रोल भएन। घरमै रेस्टुरेन्ट थियो। मीठो–मीठो खानेकुरा पाक्थ्यो। जे पनि खाइदिन्थेँ। रेस्टुरेन्टमा मीठोमसिनो पाक्दा मन थाम्नै सक्दिनथेँ। खाने काम मात्रै भयो, एक्सरसाइज केही भएन। खानपान र अल्छीपनले मोटाउँदै गएँ। सबैले मलाई मोटी भन्न थाले। छरछिमेकले ‘छोरी धेरै मोटाई, दुब्लाउन लगाउनु न’ भन्दै आमाबुबालाई सल्लाह दिन्थे।
एक पटक उसले मलाई मोटी भनेर साथीहरूसँग खिल्ली उडाएको थाहा पाएँ। एकदमै नरमाइलो लाग्यो। उसका लागि दुब्लाउने कोसिस नगरेका होइन तर पछि शरीर हेरेर माया लगाउनेका लागि किन दुब्लाउने भन्ने लाग्यो। जस्तो छु, त्यस्तै ठीक छु भन्दै वास्ता गरिनँ। पछि हाम्रो ब्रेकअप भयो। म मोटी भएकै कारण हाम्रो ब्रेकअप भएको हो भन्दा नि हुन्छ। फोटो समाचार सम्पूर्ण बाट GERMAN NEPAL
आफ्नै विवाह भएको सपनामा देख्दा के हुन्छ ?
सिन्धुपाल्चोकको सरकारी कार्यालय अज्ञात समुहले यसरी जलायो
यी चर्चित नायिकाले आफ्नो विरोधी गर्नेहरुलाई कुकुर भन्दै यस्तो गरिन्